Fahatsiarovana ny « 7 febroary » : hanao diabe ho eny Ambohitsorohitra ny mpomba an-dRajoelina sy ny MRM | NewsMada
Fahatsiarovana ny « 7 febroary » : hanao diabe ho eny Ambohitsorohitra ny mpomba an-dRajoelina sy ny MRM
Araka ny vaovao voaray, fantatra fa hiakatra eny Ambohitsorohitra hanamarika ny datin’ny 7 febroary ny mpomba an-dRajoelina sy ny eo anivon’ny Mitsangana ry Malagasy (MRM), anio. Hiatrana ary handray ny fepetra rehetra koa anefa ny Emmo/Reg.
Niainga tamin’ny fivoriana nataon’izy ireo, ny faran’ny herinandro teo teny Ambodivona, izao fiarahana izao. Nangataka ny hiarahan’ny filohan’ny Mapar amin’izy ireo, hanao diabe am-pilaminana miala eny Analakely hihazo an’Ambohitsorohitra ny MRM. Fantatra anefa fa tsy nanaiky io fanasana io Rajoelina. Na izany aza, nilaza ny MRM fa hanao filaharana am-pilaminana hiakatra eny Ambohitsorohitra hanamarika io fotoam-pahatsiarovana io. Hanampy isa ireo ihany koa ny mpomba ny filohan’ny Tetezamita teo aloha, toy ny efa mahazatra ary fanaony isan-taona. Anisan’izany ny avy amin’ny TGV nivadika ho Mapar, ahitana ireo depiote sy birao politikan’ny Mapar. Nifanaraka izy rehetra fa hanao akanjo fotsy ambony sy ambaniny mainty avokoa.
Fizarana vola toy ny mahazatra
Raha ny vaovao voaray hatrany, efa nisy ny fanentanana any ifotony, ary mihevitra ny hitondra olona 500 isaky ny boriborintany izy ireo hanao fihetsiketsehana fahatsiarovana izany. Nandeha mihitsy aza ny feo fa misy ny fizarana vola ho an’ireo hamonjy eny Analakely na Ambohitsorohitra.
Nanamafy izany ny eo anivon’ny MRM ary nilaza fa maromaro ireo mpanohitra ny fitondrana ho avy any hanatitra voninkazo. “Nivory tokoa izahay nandinihana ny hitondrana ny hetsika hatao. Fotoana iray koa io hanehoana ny firaisankinan’ny mpanohitra. Maro amin’ireo mpanohitra anisan’ny nanao ny tolona tamin’ireny 2009 ireny no ho avy eo ”, hoy ny loharanom-baovao iray.
Raha ny fandaharam-potoana voaray, hametraka fehezam-boninkazo mialoha, amin’ny 9 ora, ny Praiminisitra teo aloha, Monja Roindefo, anisan’ny nitarika vahoaka teny tamin’ny fotoan’androny.
Handray ny fepetra rehetra ny Emmo/Reg
Raha ny vaovao avy any anivon’ny mpitandro filaminana kosa, nilaza izy ireo fa efa misy ny fepetra raisina mifanaraka amin’izao trangan-javatra hiseho izao. Anisan’izany, ohatra, ny tsy fahazoana manao hetsika an-dalambe mety hanohintohina ny fifamoivoizana sy ny filaminana. Hisy ihany koa fepetra horaisina ho an’ireo mikasa hanakorontana sy hanararaotra ny zava-misy. Efa vonona amin’izany ny Emmo/Reg ary ao anatin’ny fanangonam-baovao tanteraka. Na izany aza, tsy nisy ny nangataka alalana ireo hanao hetsika fahatsiarovana anio ireo. “Mahazo manao izany avokoa ny rehetra, saingy tsy maintsy arahina ny toromarika rehetra”, hoy ny mpitandro filaminana.
Araka izany, hifanositosika sy hifampiaka-peo na hifampihantsy eny indray izany ny mpanohitra sy ny Mapar, andaniny, ary ny AV7 an-dry Boana Jean Pierre, ankilany. Eo anelanelan’izany rehetra izany ny Emmo/Reg.